အိမ်မှုကိစ္စကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင် ဒီဇိုင်နာသင်တန်း ထပ်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးလေး စိုးပြည့်သဇင် - Cele Gabar
အိမ်မှုကိစ္စကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင် ဒီဇိုင်နာသင်တန်း ထပ်တက်နေပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးလေး စိုးပြည့်သဇင်
ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်ကတော့ သရုပ်ကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေးဖြစ်တဲ့အပြင် အိမ်မှုကိစ္စအချက်အပြုတ် ကျွမ်းကျင်လွန်းလို့ မိန်းမပီသတဲ့ မင်းသမီးလေးလို့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေခဲ့တာပါ ။ သူမ ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဟင်းလျာတွေကိုလည်း ပရိသတ်တွေအတွက် အမြဲတမ်းမျှဝေပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ။
ကောလဟာလကင်းတဲ့ မင်းသမီးလေးလို့ ပရိသတ်တွေဆီက နာမည်ကောင်းရထားပြီး မိသားစုနဲ့အတူတူ ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းဖြတ်သန်းနေတဲ့ သူမကို ချစ်ခင်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း အများအပြားပါပဲ နော် ။ လတ်တလောမှာတော့ ဘယ်အရာမှတော့မလွယ်ကူပါဘူး…စိုးပြည့်ကတော့ပညာရပ်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားပါတယ်. ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ ဒီဇိုင်နာ Mya Pwint Phyu. ဆီမှာ ဒီဇိုင်နာသင်တန်းကို ထပ်မံသင်ယူလေ့လာနေတဲ့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။
သူမရဲ့ ဆရာမဖြစ်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မြပွင့်ဖြူကလည်း အမြဲကြိုးစားတဲ့မင်းသမီးလေး မို့သရုပ်ဆောင်လဲတော် ဒီဇိုင်းပညာတွေမှာလဲ ထူးချွန်တဲ့သူလေး ဖြစ် လာမှာပါလို့ မှတ်ချက်ပေးထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ စိုးပြည့်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီဇိုင်တာသင်တန်းတက်ရောက်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို လည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Previous post ဦးမန်းဝင်းဆီသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ နီတာ
Next post စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ကိုယ်တိုင်ချီးကျူးစကားဆိုခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်းရဲ့ သီချင်းလေး